Uma ukhetha izingubo zobukhulu obukhulu, zama ukuhlanganisa kuzo ezinye izimfanelo ndawonye futhi zifudumele, futhi zivikeleke emoyeni nasemvuleni, futhi ngaleyo ndlela inani lezingubo alizange likhule. Uma ufuna ukubheka okuncane, izinkinobho kufanele zibekwe eceleni, futhi ukusika kufanele kwenziwe u-V. Phakathi naleso sikhathi, imodeli enezinyosi ezimbili kanye nemininingwane ehlanganisiwe ezembatho zangaphandle kuzokwenza isibalo sakho sibonakale sikhulu kakhulu.
Imithetho yokukhetha ukugqoka kwangaphandle kwamasayizi amakhulu
Ungagqoke i-poncho enemibono uma unemibala ekhanda. Lokhu kusebenza emahlombe amakhulu kanye nesifuba esikhulu. Ezingubo ezinjalo uzobukeka unzima, ikakhulukazi phezulu. Ungahlala uthola i-outlet - ingubo ephethe i-V-intambo, imigqa ecacile emahlombe, izakhi zokuhlobisa kufanele zingekho. Ungafaki izikhwama ezisindayo - zigxila ukunakwa endaweni yesifuba.
Udinga ukuhamba ngokucophelela endaweni yamathanga neminyango, uma ikhulu, impela. Kulesi simo, kuyadingeka ukukhetha ingubo noma ingubo yesitayela se-classical, ubude emadolweni, kungenzeka ukuthi ifakwe, kodwa ngaphandle kwemigqa ecacile ehlukanisa isiqhwa nesinqimba. Ungakhathazeki ukushiyeka kwakho. Isigqoko nesembatho phakathi kwezinyathelo ngeke kukuthole ukuba ubhekane nakho, ukubonakala okubonakalayo kwalesi silwane kuhlukaniswe zibe izingxenye ezimbili kuzokwakhiwa, kuvezwe kulendawo ethile yomzimba.
Uma unezinqunu ezinkulu, ungagqoki ijeketi elifushane, i-jacket-plait. Izindebe zizohlala zivulekile, futhi ngokufaka i-decollete endaweni, uzokwenza isimo sakho sibe sikwele. Kunconywa ukuthi ungagubuli entanyeni yentombazane enezingubo kanye nezingubo. Qaphela ezinye izigqoko ezimfushane ezingaphezulu - lokhu kuyinqwaba yezingxenye zensimbi, futhi nazo, zibukeka zikhulise ukuma kwakho. Isitayela esincane - yilokho okukufanele kakhulu, gcizelela ezinye izesekeli.
Kwenzeka ukuthi ijazi eliyingqayizivele lingekho endaweni, hhayi ngalesi sikhathi, kulokhu, buyisela ijaji elifushane ngejazi elilindelwe, elizobe ligcizelele ngisho nangaphezulu uma ufaka i-A-line skirt esikhundleni sezingubo eziqinile noma i-jeans.
Uma unesithakazelo ekugcwaleni, khona-ke isembatho esikhulu sezimvu ezinamafutha oboya, ipaki elide elide, ijaji elincane eliphansi - lokhu akufanelekeli izingubo, njll. amamodeli afana nalokhu azofaka ivolumu eyengeziwe kumbalo wakho, kodwa uyayifuna ngempela? Kungcono uma ukhetha ezinye izingubo ezifana nesembatho esenziwe ngoboya noma i-cashmere - zizokunikeza ubuhle bakho obukodwa ngaphandle kokungeza amanani amaningi, futhi ugcine ukushisa.
Uma ukhetha ijazi noma ijazi lesikhathi sekwindla nobusika, zama ukugcina iphuzu lokubhekisela kulokho okukhethwa kukho. Isikhumba esingokwemvelo ngokukhanya kwakhe okukhanyayo kuzosithinta umbono obonakalayo wesibalo sakho hhayi ngendlela engcono kakhulu, isb. uzokwenza kube lula nakakhulu.
Izambatho zangaphandle ezihlelekile zokuqedela
Isitayela sesiNgisi somgqoko wamanzi ungenye yezindlela zokugqoka ezinhle kakhulu, ezifanele zonke izinhlobo zezibalo, Yebo, kubantu abaningi. Qaphela ngokucophelela ubude obuvamile, hhayi ukugcizelela amafomu wevolumu, kodwa ngokumane uwafake ngobumnene, umsele awugxila kwiminyenti. Uma ukhetha umsele, kunconywa ukuthi ukhethe ukukhetha kwakho ngohlobo lwama-classic - luyi-beige elula, eqoshiwe, noma embukisweni omnyama. Ngendlela, izingubo ezinjalo zingabhalwa ngekhanda elihlukile.
Ubukhulu obugcwele - yilokho okukhethwa kukho, lapho okudingayo ukhethe ukukhipha umsele. Kuyinto efiselekayo ukukhetha imibala emibalabala, emigqabha noma emihle. Kumele kube ngesilinganiso ngobukhulu, futhi kule ndaba kuphela uzokwazi ukufihla isisindo sakho esiningi. Lapho ukhetha noma yisiphi isisombululo sombala, qaphela imininingwane enjengama-lapels. Uma unamapulangwe angama-round and ehlangene, ama-lapels ezembatho kufanele abe mncane. Ukuze uthole isibalo esiphelele, isango elincane lomsila wesingeniso alihambisani, ukuma kwe-cutout kufanele kubonakale sengathi i-V.
Ukukhethwa kwejazi elifushane noma i-coat-trapezoid
Ingubo kufanele ibukeke njengendlela yokuklanywa. Ukwandiswa phansi, ubude phakathi kwezinkalo kuwuhlobo olulungile lwezimpahla zemizuzu yesishiyagalolunye nobusika - konke kuxhomeke ekuthunjweni kwento. I-Coat-trapezoid - le ndlela izoba abesifazane besine-wand-zashchalochkoy abanesibalo senyama yesilwane. Umphumela we-chic uzonikeza imilenze emincane endaweni kanye nomugqa ongacindezelekile kakhulu okhalweni.
Ungagxili ukuhluleka komdwebo wakho, qaphela lapho ukhetha isembatho sakho. Zama ukubheka ubuso bakho ngokubonakalayo, futhi lokhu kungafinyelelwa, njengoba wazi, usebenzisa izithende eziphakeme, i-V-neck coat, ukugcwalisa ikithi elinjalo ngesihenqo eside - konke lokhu kubaluleke kakhulu, ikakhulu uma ukukhula okuncane.
Njengoba unganciphisa ukunakwa phakathi, indawo eyinkimbinkimbi kunazo zonke emzimbeni wakho. Ukuphula ukuvumelana kokujikeleza nokuphelela okuphelele kwalendawo kuzokusiza ukusika ingubo, okumele kube yileli cala elimele. Khetha ijazi ukuze imikhono ifinyezwe, okungenani amakota amathathu, kulokhu inhlanganisela yamagilavu ​​amade asele. Ngaphandle kokungabaza, le kit uzokudala umphumela omkhulu, ngenxa yokuthi isibalo sizoba slimmer futhi ukubukeka kwakho kuzoshintsha.
Ibhola-ibhaluni noma isitayela sesilisa, okunye okunye
I-coat-trapezoid ibukeka kakhulu, kodwa lena akuyona imodeli kuphela yokukhula ngokugcwele. Kukhona okunye okukhethwa kukho - ibhaluni yengubo noma isitayela esikhulu seMantonggean. Izembatho ezinjalo zihloswe ngazo zonke izinkathi zonyaka, konke kuxhomeke ekukhethweni okufanele kwezinto. Nakuba lokhu akuyona inketho engcono kakhulu yobunjwa bobunjwa bomdwebo, kodwa kufaneleka kakhulu esimweni esibi sezulu esikhundleni sencane.
Uma ukhetha isitayela somuntu, qaphela izinkinobho, ungabeka eceleni ngokukhethwa kukho okukhethwe kabili. Ukunqunywa kufanele kube okujulile futhi ube nokuma kwe-V. Uma ungeke ukwazi ukugqoka i-trapezium-style yokugqoka, uzobe uthanda imfashini enamahlombe amancane, kodwa wehlisela phansi. Nale nguqulo yezingubo zangaphandle, ubona ngokucacile ukubukeka kwendwangu.
Ijaji elibomvu: yini okufanele ugqoke
Indlela yokukhetha izingubo, ukuya enkulumweni?
Izembatho ezenziwe ngosilika wemvelo
Izigqoko zemihlobiso ezenziwe ngezandla
Yiziphi izithombe ongabe uzibeke ekamelweni
Izinhlobo zezingoma: khetha kahle
Ilayisi nama-mushroom ku-multivark
Indlela yokusebenzisa izimonyo ezindebe?
Isitshalo seqanda ngesiSicilian
Isimo sezulu e-Abkhazia ngoJuni: sifunda isimo sezulu!
Indlela yokwenza izivivinyo zokulula
Ukulahlekelwa yiNicola Baskov kwakungaziwa ngabalandeli
Ukulahlekelwa izicathulo ephusheni, kusho ukuthini leli phupho?
Abangane baxabana, ngaphesheya ukuba babe yiziphi?